Vakinankaratra: Hanomboka ny 17-18-19 May ho avy izao ny foara ara-toekarena "Zovy" 2018. -
034 14 654 06 – 033 14 645 06
GRF: Andry Rajoelina ihany no vahaolana ho an’ny Firenena.
STARTUPPER DE ANNEE 2018-2019: Mikarakara fifaninanana ho an’ireo tanora manana tetikasa.
ELGECO PLUS: Efa mivonona amin’ny fiatrehana ny fifaninanana rehetra izay ho atao.
Ny Rado Rafalimanana: Nosakanana tsy hiditra eo Madagasikara ny angidim-by hanaovana fampielezan-kevitra
Vakinankaratra: Hanomboka ny 17-18-19 May ho avy izao ny foara ara-toekarena « Zovy » 2018.
19 avril 2018 TVPresse
Ho ambohim-pihaonan’ireo tantsaha sy ny mpandraharaha ary ny mpamatsy vola ny fisian’ny hetsika ara-toekarena « Zovy » 2018. Ao andrenivohitr’i Vakinankaratra no hanatanterahana izany ny 17-18-19 May ho avy izao. Miditra amin’ny andiany faha-efatra ity foara ity ka hisongadina amin’izany ny fifanatonan’ireo mpiantsehatra rehetra amin’ny fihariana eny amin’ny tontolo ambanivohitra.
Fanetsehana ireo mpisehatra fototra amin’ny fampandrosoana ara-barotra ao amin’ny faritra, ho fisandratana mirindra miainga amin’ny tanjaka sy otrikarenany misy any an-toerana. « Vahoaka mirotsaka amin’ny fampandrosoana, antoky ny fisandratan’ny faritr’i Vakinankaratra ».
Trano heva manodidina ny 120 no ho hita mandritra izany, hisy ny varotra fampiratiana, famelabelaran-kevitra, ny (B to B), ny hetsika ara-javakanto, sy ara-panatanjahantena sns. Ny 85% mponina any an-toerana dia tantsaha avokoa, ka mila tosika sy fifanohanana mba ahafahan’izy ireo mampitombo ny vokatra, hoy ny lehiben’ny faritr’i Vakinankaratra, Gal RAKOTONARIVO William.
Hiantsoana ny mpampiasa vola amin’ny izay mety ahafahana manampy azy ireo, indrindra fa ny lalam-barotra. Azo atao tsara ny manangana orinasa hampiodinana izay vokatry ny tany izay, ary hampitombo ny fananan’asa ihany koa. Isan’izany ny famokarana ronono izay mbola malalaka io seham-pihariana io raha ny eto Madagasikara.
Actualités, EconomiqueFoara Zovy 2018, RAKOTONIRINA William
Previous Previous post: AV7: Tetika fanakorontanana no hataon’ny solombavambahoaka TIM sy MAPAR.
Next Next post: Antoko ABA: Miainga eny anivon’ny fianakaviana ny fampandrosoana ny firenena.
ISPM: Olana sedrain’ny mpianatra ny vola ho entina hananganana orinasa ho azy.
ANEFA: Ajanona ny fitokonana, aleo hiatrika fanadinana ny mpianatra.
CNTEMAD: Hafindra eny amin’ny Lycée Andohalo ireo mpiadina eny amin’ny Lycée Nanisana.
Hafari Malagasy: Nisokatra androany ny ivon-toerana fampianarana informatika.
IVENCO: Hankalaza ny taona niakarany an-tsehatra any ivelany ireo mpanakanto Malagasy.
Fiangonana SHINE: Fotoam-bavaka 7 Alahady etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina Mahamasina.
Taom-baovao iraisan’ny Malagasy: Tsy ifandroritana intsony ny daty.
Nadine RAMAROSON: Feno fito taona androany ny nahafatesany.
Aretin’ny fialan-tsasatra: Mila mitsabo tena ny olona, tsy tokony hanao dokotera tena.
Santé Publique: Madagascar a été déclaré officiellement libre de la poliomyélite.
Service de santé militaire : Le premier Hôpital Militaire Régional à Ampahibe
Toetr’andro: ny zaza sy ny ankizy no betsaka miakatra hafanana tampoka.
Soavinandriana Itasy: Nifarana omaly Alahady ny fifaninanana kitra ho an’ny vehivavy.
FMF: Andraikitry ny federasiona ireny tranga niseho teny Mahamasina ireny.
MONDIAL 2018: Ireo fandaharam-potoana tsara ho fantatra.
Fikambanana sy mpanao politika: Manome 12 ora ny filohan’ny HCC hametra-pialana.
Fampielezan-kevitra 2018: Tetsy Ambohijatovo ireo kandida miray hina no nanokatra izany.
CETIS: Volabe no tsy voaloan’ny fanjakana tamin’ny fanaovana « Permis biometrique sy carte grise ».
Développement agricole et rural à Anahidrano, Antsohihy : Le Réseau hydroagricole du périmètre de Maroadabo réhabilité totalement.
RAJAONARIMAMPIANINA Hery: Prix d’Excellence pour le Développement Africain.
ALM: 11, 12, 13 Oktobra, Hetsika mikasika ny boky sy ny soratra.
GERP: Atahorana ho lany tamingana ny varika raha tsy mitandrina isika.
Firenena INDIANA: Nanolotra vary 1000T sy fanafody maro ny BNGRC.
Mpiasan’ny orinasa etsy Avaradoha: Misesisesy ny fandroahana ny mpiasa.
HCC: Misy andian’olona nitondra sora-baventy omaly.
Mponina eny Ambodihady: Teratany vahiny manjakazaka sy manampatra ny harenany.
Député Tsaratanana: Mandry tsy lavo loha ny mponina any amin’izao fotoana izao.
MPAE: Tsy misy atahorana intsony ny firongatry ny andiam-balala eto amintsika.
TVPresse 2017 © All rights reserved.